Ny orinasa Ampio no mpamorona ny rafitra Smart Home. Izy io dia misy fitaovana am-polony maro karazana. Ny famoronana trano mahira-tsaina dia mitaky fahalalana sahaza izay ampitainay tsy tapaka aminao. Ho tsara kokoa ny trano fonenana rehefa mampiasa ny lahatsoratra nomaninay izahay.
Efitrano fampirantiana Ampio ao Rybnik avy any iFuture
11 Novambra 2020
ampio, Hoppe, showroom, Efitrano fampisehoana Ampio
Tiako ny mahita trano fampisehoana, indrindra fa ireo vita tsara. Tsy miresaka momba ny fampisehoana ny singa fanaraha-maso sy sensor roa ao amin'ny efitrano kely aho ary miantso azy io ho trano fampisehoana, fa efitrano tena voaomana izay hanao ny vokany: wow! Toy izany ...
Rafitra AMPIO - momba ny inona izany?
ampio, AFAKA, Andalana lehibe, trano hendry
Fantatrao ve ny orinasa AMPIO? Ary ny bisy CAN? Ny fampandrenesana, ny motera ary ny fifandraisana amin'ny motera no tena nampifandraisako azy ireo. Raha ny hita, marina izany, satria izany no nataon'ny AMPIO taloha kelin'ny rafitra manan-tsaina ...